जहाँ १४० रुपैयामा घर किन्न सकिन्छ ! | जहाँ १४० रुपैयामा घर किन्न सकिन्छ ! |
जहाँ १४० रुपैयामा घर किन्न सकिन्छ !
उज्यालो प्रतिनिधि ६ मंसिर २०७७, शनिबार रोचक बिचित्र
काठमाडौँ । एउटा सुन्दर घर सबैको सपना हुन्छ, तर यसलाई किन्न जीवनभरको आम्दानी जान सक्छ । यद्यपि हामी तपाईलाई भन्छौं कि संसारको एक शहरमा घर तपाईको फोनको रिचार्ज योजना भन्दा सस्तो हुँदै गइरहेका छन्, के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ ?
तपाईं यो कुरा थाहा पाउँदा चकित हुनुहुनेछ कि यस संसारमा यस्तो एउटा ठाउँ छ, जहाँ घर १४० नेपाली रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ । तर हामी तपाईलाई बताउँछौं कि यहाँ कोही बस्न चाहँदैनन । यस शहरको नाम सलेमी(Salemi) हो, जुन इटलीको सिसिली टापु (italy) मा अवस्थित छ।
यो पनि पढ्नुहोस् ... 'जब मैले आफ्नो शरीरमा योनी नभएको कुरा थाहा पाए'
यो एक ऐतिहासिक स्थान हो, जहाँ केहि घरहरू छन्, जुन १६ औं शताब्दीसंग सम्बन्धित छ। यद्यपि, १९६८ मा भूकम्प पछि यो शहरमा धेरै क्षति पुगेको थियो ।
मेयरले दिए खास अफर
उक्त रिपोर्टका अनुसार इटलीको यो शहर विगत केही वर्षदेखि निवार्सन समस्याको सामना गर्दै आएको छ । यस कारणले गर्दा मानिसहरू धेरै सस्तो दरहरूमा घरहरू बेच्दै छन्, जुन केवल एक यूरो मुल्यदेखी शुरुवात हुन्छ । सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि आधारभूत सुविधा र सेवाहरू यहाँ सडकहरूबाट इलेक्ट्रिक ग्रिडहरू र सेवेज पाइप जस्ता सेवाहरु उपलब्ध छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् ... निको भएका कोरोना संक्रमितहरुको रगत अवैध रुपमा बिक्री गर्दै, १९ लाख रुपैयाँसम्म असुल्दै
सहरका मेयर डोमेनेको भेनुटीले भने कि शहरलाई पहिले जस्तै फेरि जनसंख्या दिने प्रयासमा घरहरू सस्तो मुल्यमा उपलब्ध गराइएका छन् किनकि यहाँका मानिसहरूले निरन्तर यस ठाउँ छोड्दै अर्का ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् ... बेलायत कै सब‌ैभन्दा ठूलो परिवार,घर सफा गर्न मात्रै ३ घण्टा
सरकारले धेरै वर्षदेखि यस योजनामा ​​काम गरिरहेको छ। तर यसै बीचमा, कोरोनाभाइरस आए, जसको कारणले केही समस्याहरू शुरू भयो। यी सबै घरहरू सिटी काउन्सिलका हुन्, त्यसैले तिनीहरूको बिक्रीमा ढिलाइ हुने छैन।
राम र सिताको जीवन कहानी
कुन बार जन्मेको मान्छेको स्वभाव र भाग्य कस्तो
आज कुकुर तिहार : कुकुरसम्बन्धि केही रोचक जानकारी